April 4, 2021 - Padaethar
ဒီလိုအပြောတွေကြောင့် မိန်းကလေးတွေ အများစု ဘဝပျက်သွားကြတာပဲ…
April 4, 2021 by Padaethar
ခု​ခေတ်​မှာ မြန်​မာမိန်းက​လေးအများစု ဘယ်​လိုဘဝပျက်​သွားသလဲဆိုတာ သိ​စေချင်​လို့ ဒီ post ကို တင်​ရတာပါ ။ အစအဆုံးဖတ်ပြီးရှယ်ပေးလိုက်ပါနှမချင်းကိုယ်ချင်းစာတယ်ဆိုရင်ပေါ့….. ” အရမ်းချစ်တယ် ချစ်ရယ် “ ” မောင်ကို တကယ်ချစ်တယ် ဆိုရင် “ ”မောင် ဆန္ဒကို လိုက်လျောပေးပါနော့်”” ဟင်အင်း မောင် ” ” ချစ် ကြောက်တယ် မလိုက်လျောပါရစေနဲနော် မောင် “ ” ချစ်ကလည်းကွာ “ ” မောင်က ချစ်ကို တကယ်ချစ်တာပါကွာ ” “ဟင်အင်း မောင့့်”” ကျွန်မ တို မိန်းမသား ဘဝ မှာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အပျိုစင် ဘဝ လေးကိုတော့ လက်မထပ်ရသေးပဲ “ ” မပေးဆပ်ပါရစေနဲ … Read more
Categories ဘဝနှင့်အချစ်ရေးရာ Leaveacomment
မင်္ဂလာဦးညအတွက် အပျိုစင်သတို့သမီးလေးတွေ ကြိုတင်သိထားရမယ့်အချက်များ
မင်္ဂလာဦးညအတွက် အပျိုစင်သတို့သမီးလေးတွေ ကြိုတင်သိထားရမယ့်အချက်များ သ တို့သမီးလေးတွေအတွက် ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ ကိုယ်လက်နှီးနှောရတော့မယ့် မင်္ဂလာဦးညအတွက် ကြိုတင်ရင်ခုန် ကြောက်စိတ်၊ ရှက်စိတ်တွေ ရှိနေမှာ အသေအချာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် အတူနေ အတွေ့အကြုံ မရှိသေးတဲ့ သတို့သမီးလေးတွေဆို ပိုဆိုးတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး မင်္ဂလာဦးညကို အခက်အခဲ၊ အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေဘဲ ပျော်ရွှင်ရင်ခုန်လှိုက်မောစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်နော်။ ဒါကြောင့် အပျိုစင် သတို့သမီးလေးတွေ ကြိုတင်သိထား၊ ပြင်ဆင်ထားမယ့် အရာလေးတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ မင်္ဂလာဦးညတိုင်း အတူနေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး တော်တော်များများက မင်္ဂလာဦးညကို ကြိုတင်ရင်ဖို စိတ်လှုပ်ရှားကြပေမယ့် အမှန်တကယ် အဲ့ဒိညမှာတော့ မင်္ဂလာပွဲကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြန်လှန်ပြောတာ၊ အလုပ်ရှုပ်ရင်း မနေဖြစ်ကြတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အရမ်းကြီး ကြိုတင်စိတ်ဖိစီးမနေပါနဲ့။ ၂။ … Read more
ပုရိသတွေ ပထမဆုံး မိန်းကလေးတွေကိုတွေ့ရင် သတိထားမိတဲ့အချက်(၉)ချက်
လူတစ်ယောက် နဲ့တစ်ယောက်စတွေ့ကြပြီဆိုရင် သတိထားမိတတ်တဲ့အရာလေးတွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ပုရိသ ယောင်္ကျားလေးတွ မိန်းကလေး တွေကိုတွေ့ရင် ပထမဆုံးသတိထားမိတဲ့အချက်(၉)ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ (၁) အပြုံး လှပတဲ့ အပြုံး လေးတွေကို ယောက်င်္ကျားလေးတွေက အလွယ်တကူသတိပြုမိတတ်ပါတယ်။ပြုံးနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေကိုလည်း ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ ယူဆလေ့ရှိကြပါတယ်။ ပြုံးနေတဲ့ ကောင်မလေးတွေကိုလည်း ယောင်္ကျားလေးတွေက စကားပြောဖို့ ပိုမိုရဲတင်းကြပါတယ်။ အပြုံးဆိုတာ ကူးစက်လွယ်ပါတယ်။သင်ကအခြားတစ်ယောက်ကို ပြုံးပြရင် များသောအားဖြင့် သင့်ကိုလည်း ပြန်ပြုံးပြလေ့ရှိကြပါတယ်။ သုတေသနပေါင်းများစွာကလည်း အပြုံး တစ်ပွင့်ဟာ ကောင်းသဘောဆောင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ် လို့ဆိုပါတယ်။ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်က မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကိုစတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူမရဲ့စစ်မှန်တဲ့ အပြုံး ကိုသတိထားမိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတုအယောင်အပြုံးဆိုရင်လည်းယောင်္ကျားလေး တွေက အလိုလျောက်သိကြပါတယ်။သင့် ချစ်သူ ဘယ်သူဖြစ်မယ်ဆိုတာမပြောနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ လှလှလေး ပြုံးတတ်အောင် လေ့ကျင့်ထားသင့်ပါတယ်။ (၂) မျက်လုံး ယောင်္ကျားလေး တွေ မိန်းကလေး တွေကို … Read more
2021ခုနှစ် သက္ကရာဇ် ၁၃၈၃-ခုနှစ်၊ မန္တလေး မဟာသင်္ကြန်စာ ဟောစာတမ်းကြီး
၁၃၈၃-ခုနှစ်၊သင်္ကြန်စာ ဟောစာတမ်းကြီး ဇေယျတု မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၈၂ခုနှစ်၊ နှောင်းတခူးလ္ဆန်း၃ရက်၊ခရစ်နှစ်2021 ၊ဧပြီလ(14)ရက်(၊ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) မြန်မာစံတော်ချိန်နံနက် ၅နာရီ၄၆မိနစ်၅၅စက္ကန်.အချိန်တွင် မဟာသင်္ကြန်ကျပါသည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၈၂နှစ်ခုနှစ်၊နှောင်တစ်ခုလဆန်း(နှစ်ခုနှစ်၊နှောင်တစ်ခုလဆန်း(၄)ရက်၊ခရစ်နှစ်2021၊ဧပြီလ(15)ရက်( ကြာသပတေးနေ့)သည်မဟာသင်္ကြန် (အကြတ်ရက်)ဖြစ်သည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၈၂ခုနှစ်၊ နှောင်းတခူးလ္ဆန်း၅ရက်၊ခရစ်နှစ်2021 ၊ဧပြီလ(16)ရက်၊​(သောကြာနေ့)နံနက် ၉နာရီ၅၁မိနစ်၃၆စက္ကန့်တွင်မဟာသင်္ကြန်တက်ပါသည်။ ထိုကြောင်မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၈၃ခုနှစ်၊ဦးတခူးလ္ဆန်းခုနှစ်၊ဦးတခူးလ္ဆန်း(၆)ခရစ်နှစ်2021၊ဧပြီးလ(17) ရက်၊စနေနေ့သည် နှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့ဖြစ်၊ကောဇာသက္ကရာဇ်၁၃၈၃-ခုနှစ် လက်ထက်ရက်မရှိ၍ …. ဗုဒ္ဓဘာသာ၊သာသနာတော် ဝန်ထမ်း ရဟန်းအရှင်မြတ်တို့မှာ မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၈၃ခုနှစ်၊ဝါဆိုလပြည်ကျော်(၁)ရက်၊ ခရစ်နှစ်(2021)၊ဇူလိုင်လ(၂၄)ရက်၊စနေနေ့တွင် ပထမပုရိမဝါ ကပ်ဆိုတော်မူကြရမည်။ ဒုတိယပစ္ဆိမဝါကို ဝါခေါင်လပြည်ကျော်(၁)ရက်၊သြဂုတ်လ(၂၃)ရက်တနလာင်္နေ့တွင် ကပ်ဆိုတော်မူကြရမည်။ (ကန်ဦးမူသင်္ကြန်စကားပြေကျမ်း) ကောဇာသက္ကရာဇ်၁၃၈၃ခုနှစ်အတွက် အရှင်သခင်ဂြိုဟ်ဖွဲ့ ဝဿပတိဧကရာဇ် -တနလာင်္ဂြိဟ် သေနာပတိ ကာကွယ်ရေး – ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် သဿပတိ စိုက်ပျိုးရေး-စနေဂြိုဟ် ရဿပတိ ကုန်သွယ်ရေး -တနလာင်္ဂြိုဟ် နိရဿတိ ဓာတ်သတ္တု-သောကြာဂြိုဟ် အသီးသီးသည်၊နေစင်္ကြာဝဋ္ဌာကြီးအာ ဥပါဒ်ဘေးအန္တရာယ်အပေါင် ကင်းဝေးပြီး ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားအပေါင်း … ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာစေခြင်း​ … Read more
အရေးကြုံရင် အသုံးဝင်ပါတယ်…မိန်းကလေးတွေ ဖတ်ပေးကြပါ …
မိန်းကလေးတွေ ဖတ်ပေးကြပါ အရေးကြုံရင် အသုံးဝင်ပါတယ် Self defense tip နည်းနည်းပေးပါ့မယ်။ ဒီနည်းတွေသုံးဖို့ အားကောင်းဖို့မလိုပါဘူး။ 1. လက်သီးနဲ့ မေးစေ့/ပါးကို မထိုးပါနဲ့။ လက်သီးမဆုပ်တတ်ရင် လက်ကျိုးတတ်ပါတယ်။ လက်ချောင်းကြားထဲ သော့ထည့်ဆုပ်တာမျိုးလည်း မလုပ်သင့်ပါဘူး။ 2. လက်ထဲက တခုခုကို ကိုင်မယ်ထုမယ်ဆို လက်သီးဆုပ်ပြီးကိုင်ပါ။ (လှံပစ်ရင် လှံကိုကိုင်တဲ့ပုံမျိုး) 3. နောက်တခုက လက်သီးဆုပ်နည်းပါ။ လက်မကို အပြင်ထုတ်ပြီး ဆုပ်ရပါတယ်။ လက်သီးဆုပ်ပြီး လက်ကောက်ဝတ်နဲ့ တစ်တန်းတည်းထားရပါတယ်။ လက်သီးဆုပ်ရင် လက်ချောင်းလေးတွေ ညီနေရပါ့မယ်။ လက်ညိုးလက်ခလယ်က ကြွနေရင် ကျိုးတတ်တာမို့ လက်သူကြွယ်နဲ့ လက်သန်းကိုပါ အပေါ်နည်းနည်းမြှောက်ပြီး ညီနေအောင်ထားပါ။ အဲ့လို လက်ဆစ်ညီညီ ထိုးလိုက်တဲ့အခါ လက်ဆစ်လေးခုလုံးက ပစ်မှတ်အပေါ်ကျသွားတာမို့ ထိတဲ့လူပိုနာပါတယ်။ 4. နားထင်ကို လက်ဖနောင့်နဲ့ရိုက်ပါ။ အားပြင်းလေကောင်းလေပါပဲ။ … Read more
မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှ ဖမ်းယူရရှိပြီး မိုးရွာနိုင်သောဒေသများ
မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှ ဖမ်းယူရရှိခြင်း 4.4.2021 မနက် (9.30) လေထု လှုပ်ရှားမှုများအရ မန္တလေးတိုင်း အရှေ့ဘက် မကွေးတိုင်အောက်ဘက် ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်နှင့် ဒေသအချို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသအချို့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသအချို့ ကရင်ပြည်နယ် မွန်ပြည်နယ် တနင်္သာရီတိုင်း တို့တွင် မိုးအနည်းငယ်မှ အချို့နေရာတွေမှာမိုးကြီးနိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသအနေနဲ့ ကျိုက်ထို ဘီးလင်း မော်လမြိုင် ကျိုက်မရောမြို့ ဘာအံ မုဒုံ သံဖြူဇရပ် ရေးမြို့ ထားဝယ် မြိတ် ကော့သောင်းဘက်တွင် မိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်ပါတယ် လေတော့ နည်းနည်းပါလာနိုင်ပါတယ် HtayAung unicode မိုးလဝေသဂွိုလျတုမှ ဖမျးယူရရှိခွငျး 4.4.2021 မနကျ (9.30) လထေု လှုပျရှားမှုမြားအရ မန်တလေးတိုငျး အရှဘေ့ကျ မကှေးတိုငျအောကျဘကျ ဧရာဝတီ မွဈဝကြှနျးပျေါနှငျ့ ဒသေအခြို့ ရခိုငျပွညျနယျဒသေအခြို့ ရနျကုနျတိုငျး ဒသေအခြို့ … Read more
သင့်ကို ဆွဲစားဖို့သက်သက်သာလာတွဲနေတဲ့ ဘဲတွေရဲ့လက္ခဏာ(၅)ချက်
သင့်ကို ဆွဲစားဖို့သက်သက်သာလာတွဲနေတဲ့ ဘဲတွေရဲ့လက္ခဏာ(၅)ချက် ခုခေတ်မှာ တစ်ချို့သော ယောက်ျားလေး တွေဟာ မိန်းကလေးတွေကို တဏှာစိတ် သက်သက်နဲ့သာ တွဲတတ်ကြပါတယ် …။ ဒီလို ယောက်ျားလေးတွေဟာ တကယ်ကို ယုတ်ညံ့ပြီး အောက်တန်းကျ သူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ် …။ ဒီလို လူမျိုးတွေကို ပတ်သက် မိနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေ အနေနဲ့ အမြန်ဆုံး နောက်လှည့် သင့်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အကျင့် စရိုက် တွေကို ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်နော် …။ (1) သူဆက်သွယ်တဲ့ ပုံစံ သင့်ကို တဏှာစိတ် သက်သက်ကြောင့် တွဲနေတဲ့ သူဟာ သင့်ကို ဆက်သွယ်တဲ့ အခါမှ တဏှာစိတ်နဲ့ပဲ ဆက်သွယ်နေပါ လိမ့်မယ် …။ ကျန်တဲ့ အချိန်တွေကျ ရင် မအားဘူး … Read more
သင်တို့ရဲ့ အချစ်ရေးကိုခိုင်မြဲစေမယ့် အချက်များ April 19, 2021